Nri Jamaica | Njem zuru oke
Absolut Caribe | | Caribbean
Kichin nke Jamaica Ọ dị mma n'ihi na ejiri ọtụtụ nri na-eri ya, jiri obere anụ, mee ka azụ, agwa, na akwụkwọ nri dị elu yana, karịa ihe niile, n'ihi na ọ bụ ngwakọta nke ihe kacha mma n'Africa, Europe, India na china nwere na-enye.
N'aka nke ọzọ, ndị Jamaic amatala na mmekọrịta dị n'etiti nri na ahụike. Ikekwe nri ndị Jamaica dị mma n'ihi ọdịmma ma ọ bụ ohere. Kedu ka onye ọ bụla ga-esi kọwaa ihe kpatara ụfọdụ akwụkwọ nri ọgwụ dị elu, dịka ginger, galik, cayenne na ose na-ekpo ọkụ ka ọ bụrụ isi nri eji eme ihe na nri ndị Jamaica.
Scotch Bonnet Ose
Chidị chili a bụ ihe dị mkpa na nri Jamaica maka ekpomeekpo pụrụ iche. Iji nweta ekpomeekpo nke ọkpọ scotch na-enweghị okpomọkụ, nke kachasị na mkpụrụ, ị nwere ike iji akpụkpọ ahụ nwayọ. Ma ọ bụ jiri ya dum na ofe ma wepu ya n'emebighị akpụkpọ ahụ mgbe ofe sie.
Ha dị na ụlọ ahịa nri Jamaica, mana kpachara anya ma jụọ ajụjụ, n'ihi na ọtụtụ oge ha na-ere ihe si Cuba ma ọ bụ Central America.
A na-enweta kokcon n'ọtụtụ ebe na Jamaica ma na-eri ya n'ọtụtụ ụzọ. N'oge ntozu, a na-eji aki oyibo mee ihe maka ihe ọ theụ theụ na-enye ume ọhụrụ, nke etinyere n'ime isi. Na ntolite ntozu nke "anụ" dị ezigbo nro ma dịkwa nro ma na-etolite obere oyi akwa n'ime kernel ihe dịka asatọ nke anụ ọhịa.
Mgbe "mmiri" riri ngaji anụ wee rie. Mgbe ntozu oke, a na-eji aki oyibo mee ihe karịsịa iji mepụta mmanụ. "Anụ", akụkụ ọcha nke aki oyibo na-echi ya ọnụ ma wepụ mmanụ mmanụ ahụ ma wepụ ya site na esi iji wepụ mmiri na-ahapụ ihe fọdụrụ na mmanụ.
A na-eji akị n'ime ala eme achịcha na ato uto. Chefuo ihe ị nụrụ gbasara isi nri Jamaica a. Aki oyibo bụ "ọgaranya na lauric acid," nke nyocha ọhụụ gosipụtara na-abawanye cholesterol dị mma, enwere mbelata ọrịa ọrịa obi, ma bụrụkwa mgbochi mkpali, antibacterial, na antiviral.
Ndi nbibiGastronomyNoticiasAhụikeTurismoNdị njem nleta
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Nri Jamaica
Iwu ọkwọ ụgbọ ala na Croatia 1
England anụ achịcha